सिप्रदी कन्ष्ट्रक्सन एक्स्पाे नैकापमा, एक्स्पोमा गाडि किन्नेलाई दुई किलो चाँदीदेखि यूरोप टुरसम्मको अफर
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:२१
काठमाडौं । सिप्रदी टेडर्सले चैत ८ र ९ गते नैकापमा शिप्रदी कन्ष्ट्रक्सन एक्सपो आयोजना गर्दैछ । कम्पनीले शुक्रबार एक्सपोको उदघाटन गर्दैछ । उक्त एक्सपोमा कन्ष्ट्रक्सन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रेन्जका गाडीहरु प्रदर्शन गराइने छ । कन्ष्ट्रक्सन क्षेत्र तथा सिमेन्ट उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर मेला.....
७ चैत्र २०७५, बिहीबार १३:०८
एजेन्सी । नानोको असफलतापछि टाटा मोटर्सले मारुती अल्टो र ह्युन्डाई स्यान्ट्रोलाई टक्कर दिन नयाँ सानो ह्याचब्याक ल्याउने तयारी गर्दै छ । अहिलेका लागि टाटा टियागो टाटा लाइनअपमा इन्ट्री लेभल कार हो । टाटाको यो कार टियागोभन्दा सानो हुनेछ । साथै यो टाटाको पहिलो इन्ट्री लेभल इलेक्ट्रिक कार पनि हुन सक्नेछ । समाचार.....
६ चैत्र २०७५, बुधबार ११:४६
एजेन्सी । जतिसुकै नयाँ मोडलका अत्याधुनिक गाडी किन नआउन्, तर मानिसहरुले खोज्ने भनेको सधैं राम्रो माइलेज दिने गाडी नै हो । विद्युतीय र हाइब्रिड गाडी यसको राम्रो समाधान हो, तर यो आउन अझै धेरै समय लाग्ला । आज हामी तपाईंलाई अट्ठाईस किमिसम्म माइलेज दिने केही गाडीहरुका बारेमा जानकारी दिँदैछौं । १. होन्डा अमेज.....
४ चैत्र २०७५, सोमबार १४:२४
काठमाडौं । सवारीसाधन चलाउँदै गरेका बेला तपाईं ट्राफिक प्रहरी नदेखेपछि लेन मिच्नुहुन्छ ? अथवा सडक नियमको ख्याल गर्नुभएको छैन ? होसियार हुनुस् है ! सडकमा ट्राफिक प्रहरी नभए पनि तपाईंका त्यस्ता गल्तीबारे ट्राफिक प्रहरी बेखबर छैन, त्यसो गरेको भेटिएमा ट्राफिक प्रहरी घरमै पुगेर कारबाही गर्न सक्छ । ट्राफिक.....
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १६:३१
एजेन्सी । भारतलगायत नेपालमासमेत लोकप्रिय मानिएको होण्डाको कारहरुमा खराबी आएपछि कम्पनीले आफ्ना कारहरु फिर्ता मगाएको छ । होण्डा कम्पनीले सुरक्षा सम्बन्धी कमजोरी रहेको भनिएका आफ्ना करिब एक दर्जनजति मोडलका गाडीहरु फिर्ता मगाएको बताइएको छ । अहिले कम्पनीले अमेरिका र क्यानडाबाट करिब दश लाख आफ्ना गाडीहरु.....
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १३:०१
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने ३४ हजार ३७ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विसं २०७४ वैशाखदेखि हालसम्म उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने उक्त सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको हो । महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीर रूपले बढेर उपत्यकावासीको.....
हुन्डाईको विशेष एक्स्चेन्ज योजना चैत ५ गतेसम्म
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:३२
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेताले विहीबारदेखि एक्स्चेन्ज योजना सुरु गरेको छ । हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सञ्चालन सुरु गरेको यो योजना यही चैत ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । एक्स्चेन्ज कार्यक्रम सहित स्पट एक्स्चेन्ज तथा मूल्यांकन, सरल वित्तीय तथा विमा.....
पुरानै फिचरसहित बजाज पल्सर १५० अब नयाँ रङमा
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १४:१३
एजेन्सी । बजाज अटो इन्डियाले आफनो सबैभन्दा प्रसिद्ध बाइक पल्सर १५० क्लासिकको नयाँ भेरियन्ट लन्च गरेको छ । यसमा कम्पनीले विशेष परिवर्तन केही गरेको छैन । बजाजले यो नयाँ बाइकलाई मात्र नयाँ रंग नियाेनमा ल्याएकाे छ । नयाँ पल्सर नियाेन पूर्णरुपमा पहिलेबाटै बजारमा रहेको पल्सर १५० को क्लासिकमा बेस छ । परिवर्तनको.....
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १७:४०
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले सात महिनादेखि यताका मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । झण्डै चार लाख सेवाग्राहीको अनुमतिपत्र छपाइका क्रममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार पहिले सेवाग्राहीले आवेदन दिएको एक वर्षसम्मको.....
यामाहाको स्ट्रिट फाइटर भारतीय बजारमा लन्च हुँदै, यस्ता छन् फिचर
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १७:०३
एजेन्सी । यामाहाले आफ्नो नयाँ स्ट्रिट फाइटर एमटी १५ लाई आगामी मार्च १५ मा भारतीय बजारमा लन्च गर्दैछ । यामाहाको यो बाइकको अगाडिको लुक्स ट्रान्सफर्मर्स फिल्मबाट प्रेरित छ । बाइकको फ्रन्टलुक अटोबट जस्तै देखिन्छ । कम्पनीका अनुसार बाइकले प्रतिलिटर ४५ किलोमिटरको माइलेज दिन्छ । यसको एक्स सोरुम मूल्य एक लाख.....